THE SERIES OF TRAINER BIKE (လေ့ကျင့်ခန်းသုံးစက်ဘီး) - BaganMart
Model : လေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီး 3.6A-4, Bike, Elliptical Bike, Deluxe Elliptical Bike လက်လွှဲလမ်းလျှောက်စက်ဘီး, Magnetic Elliptical Bike လက်လွှဲလမ်းလျှောက်စက်ဘီး, Recumbent, လေ့ကျင့်ခန်းသုံးစက်ဘီး, B902 brand
(1). လေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီး 3.6A-4 : (Speed, Calories, Distance, Pulse, Time) မီတာခွက်မှ ပြ (အရှိန်၊ ကယ်လိုရီ၊ အကွာအဝေး၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ အချိန်)
(2). Bike : (Speed, Calories, Distance, Pulse, Time) မီတာခွက်မှ ပြ (အရှိန်၊ ကယ်လိုရီ၊ အကွာအဝေး၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ အချိန်)
(3). Elliptical Bike : 9.5B (Speed, Calories, Distance, Pulse, Time) မီတာခွက်မှ ပြ (အရှိန်၊ ကယ်လိုရီ၊ အကွာအဝေး၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ အချိန်)
(4). Deluxe Elliptical Bike - လက်လွှဲလမ်းလျှောက်စက်ဘီး : KLJ - 8.9B - Commercial (အများသုံး လုပ်ငန်းသုံး) -Display Show (Speed, Calories, Distance, Pulse, Time) မီတာခွက်မှ ပြ (အရှိန်၊ ကယ်လိုရီ၊ အကွာအဝေး၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ အချိန်)
(5). Magnetic Elliptical Bike - လက်လွှဲလမ်းလျှောက်စက်ဘီး : -Display Show (Speed, Calories, Distance, Pulse, Time) မီတာခွက်မှ ပြ (အရှိန်၊ ကယ်လိုရီ၊ အကွာအဝေး၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ အချိန်)
(6). Recumbent : 9.5R (Speed, Calories, Distance, Pulse, Time) မီတာခွက်မှ ပြ (အရှိန်၊ ကယ်လိုရီ၊ အကွာအဝေး၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ အချိန်)
(7). လေ့ကျင့်ခန်းသုံးစက်ဘီး : 8601 Bike (Speed, Calories, Distance, Pulse, Time) မီတာခွက်မှ ပြ (အရှိန်၊ ကယ်လိုရီ၊ အကွာအဝေး၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ အချိန်)
(8).လေ့ကျင့်ခန်းသုံးစက်ဘီး : (Speed, Calories, Distance, Pulse, Time) မီတာခွက်မှ ပြ (အရှိန်၊ ကယ်လိုရီ၊ အကွာအဝေး၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ အချိန်)
(9). လေ့ကျင့်ခန်းသုံးစက်ဘီး : 8702 (Speed, Calories, Distance, Pulse, Time) မီတာခွက်မှ ပြ (အရှိန်၊ ကယ်လိုရီ၊ အကွာအဝေး၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ အချိန်)
(10).လေ့ကျင့်ခန်းသုံးစက်ဘီး : 8710 (Speed, Calories, Distance, Pulse, Time) မီတာခွက်မှ ပြ (အရှိန်၊ ကယ်လိုရီ၊ အကွာအဝေး၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ အချိန်)
(11). လေ့ကျင့်ခန်းသုံးစက်ဘီး : 8711 (Speed, Calories, Distance, Pulse, Time) မီတာခွက်မှ ပြ (အရှိန်၊ ကယ်လိုရီ၊ အကွာအဝေး၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ အချိန်)
(12).လေ့ကျင့်ခန်းသုံးစက်ဘီး : 8909H (Speed, Calories, Distance, Pulse, Time) မီတာခွက်မှ ပြ (အရှိန်၊ ကယ်လိုရီ၊ အကွာအဝေး၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ အချိန်)
For THE SERIES OF TRAINER BIKE (လေ့ကျင့်ခန်းသုံးစက်ဘီး)
May I get the quotation for " THE SERIES OF TRAINER BIKE (လေ့ကျင့်ခန်းသုံးစက်ဘီး)" ?